Aplọ nkwari akụ dị ọnụ ala - ụlọ ọrụ nchọta ọnụ na nkwa niile!
Hotelslọ nkwari akụ dị ọnụ ala
Ndị a na-achọ ụlọ nkwari akụ dị ọnụ ala na ụfọdụ ebe n'ụwa? Daalụ onye nwe anyị ị nwere ike chọta ụlọ nkwari akụ ị na-achọ na ọnụ ala dị ọnụ ala na ịntanetị yana nkwa niile.
Hotelslọ ọrụ nchọta ọnụ ala dị ọnụ ala
Site na nchọnchọ ụlọ nkwari akụ gara aga ị nwere ike chọta ụlọ nkwari akụ ị chọrọ ma chekwaa ekele maka nnukwu ọnụahịa anyị. Iji ya dị mfe, ị kwesịrị igosi ebe ị na-achọ ụlọ nkwari akụ ahụ, ụbọchị mbata na ọpụpụ na họtel ahụ na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na / ma ọ bụ ụlọ ịchọrọ, pịa bọtịnụ ọchụchọ ma ọ bụ ya. Site n'ebe ahụ igwe nyocha anyị ga-eme anwansi dị mkpa iji nweta gị Kacha mma ọnụahịa site na ntaneti niile. Gịnị dị mfe?
Mgbe ị na-eche maka ịhazi ezigbo ezumike, ị kwesịrị ị paya ntị n'ọtụtụ isi iji mezuo ha. Otu n’ime ihe ndị bụ isi bụ ịchọ ebe obibi. N'ime ya anyị na-ahọrọ ile anya na ọnụ ala hotels. N'ihi na n'ime ha ị nwere ike ịchọta ọnọdụ kachasị mma na-enweghị nnukwu ego. Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma iji nwee ike ịchọta ụlọ nkwari akụ nke nrọ gị! Ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ego kacha mma ị ga - enweta Pịa ebe a.
1 Hotelslọ ọrụ nchọta ọnụ ala dị ọnụ ala
2 Uru nke ntinye akwụkwọ hotels na ntanetị
3 Uzo esi aga ezumike họtelu na ntaneti
4 Chọta hotels dị ọnụ ala
5 Nyocha ụlọ nkwari akụ
Uru nke ntinye akwụkwọ hotels na ntanetị
N'ihi eziokwu ahụ bụ na ịntanetị abatala na ndụ anyị, ọ dịworị ntakịrị mfe. Nke ukwuu nke na maka hazie njem, anyị agaghịzi akwagharị site na sofa anyị. Anyị ga-ezere ogologo echere na ọ bụla ọfịs njem ma ọ bụ na ekwentị. Ma obughi nani na anyi ga - enwe ike izoputa oge ahu, kamakwa anyi ga - enwe ike igu na onu ahia anyi mara oke nma njem n'ịntanetị. E nwere ọtụtụ peeji nke na-enye nnukwu ego na ọtụtụ elele mgbe ị na-edekọ ụlọ oriri na ọ onlineụ onlineụ n'ịntanetị, ebe ọ bụ na enweghị ụfọdụ mmefu ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ.
ahịa: Na ukwuu ina, na nkwari akụ ha bukwara okenye. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na anyị elee anya nke ọma, anyị ga-echekwa ntakịrị karịa ma ọ bụrụ na anyị edebe ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ nkwari akụ ahụ. Ọ dị mma mgbe niile ịchọ ebe nrụọrụ weebụ nkwari akụ ma were nyocha dị mfe. Nweta ọnụahịa kacha mma Ebe a.
Nkasi obi: Dị ka anyị kwurula, ọ bụghị otu ihe ahụ iji gosipụta onwe anyị na a njem njem karịa ịnọdụ n'ụlọ anyị. N'ebe a, anyị ga-enwe oge dị ka o kwere mee iji nwee ike ịhọrọ ebe obibi anyị nke ọma. Nwere ike ịchọgharị ebe nrụọrụ weebụ dị iche iche ma jiri ụdị ụlọ nkwari akụ niile tụnyere ha, yana uru ha na ọghọm ha ma tupu ị banye na ya.
Nnweta: Ọnweghị ihe kedu oge ị na-eme ndoputa. Ebe nrụọrụ weebụ ahụ dị njikere ịnakwere ya mgbe niile, ma n'ụtụtụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị kpebie n'abalị.
Nkwenye: Naanị n'ime sekọnd ole na ole, ị ga-enwerịrị nkwenye nke ndoputa. Nke ahụ bụ, nkwenye ozugbo ọ ga-abụ nchekwa gị kachasị mma. Na ya, enweghi ike ihie ụzọ ọzọ, enwere ike. You ga-enyerịrị mkpuchi ụlọ gị n'ụlọ nkwari akụ ahọpụtara.
Uzo esi aga ezumike họtelu na ntaneti
Ugbu a na anyị matara nnukwu uru dị n'ịchọta ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ site na ịntanetị, anyị ga-aga n'ihu. You maara ka esi ede akwụkwọ nkwari akụ na ntanetị?. Ọ bụkwa ihe ọzọ dị mfe anyị nwere ike ime n’enweghị nnukwu nsogbu. Anyị chọrọ a họtel chọta, nke anyị ga-ahụ na ibe. Ọ bụ ụdị dị mfe ebe anaghị ajụ gị maka ozi nkeonwe gị, mana ebe ị chọrọ ịga ezumike. Na mgbakwunye na nke a, ọ ga-adịrị gị mma ịhọrọ ụbọchị mbata na ọpụpụ. Ozugbo emere nke a, anyị ga-ahọrọ ime ụlọ ahụ dịka ndị mmadụ siri dị.
Mgbe anyị dejupụtara ozi kwekọrọ na ya, anyị ga-pịa bọtịnụ “ọchụchọ” ọ ga-ahapụ anyị ụlọ nkwari akụ niile ahụ yana nhọrọ dị maka ebe anyị na-aga. Ọ bụrụ na n'oge a enweghị Ime ụlọ n'efu, ị nwere ike ịgbanwe ụbọchị ọ bụla ọzọ wee lelee nhọrọ ọhụrụ. N'otu ụzọ ahụ, ndepụta nwere ọtụtụ họtel ga-apụta. N'ebe ahụ ị nwere ike pịa nke ọ bụla iji hụ ọnọdụ ya, ihe oyiyi nke ụlọ, gburugburu, wdg.
Chọta hotels dị ọnụ ala
Ozugbo anyị banyere ndepụta nke họtel, anyị ga-ahụ onyinye kacha mma. Nke a bụ n'ihi na nhọrọ kachasị mma ga-egosi mgbe niile iji mee njem ahụ obere ọnụ. Anyị na-eche mgbe niile na azụmaahịa ahụ agaghị apụta n'ụzọ anyị, ebe ọ bụ na ọ nweghị ihe ọzọ site n'eziokwu ahụ. Site na nnukwu rịọ nke ụlọ nkwari akụ niile ruo ọkara osisi ma ọ bụ naanị na nri ụtụtụ.
Atesbọchị: Oge a bụ ndị nwere ike mgbe ụfọdụ ịbawanye ọnụ ahịa ụlọ oriri na ọ .ụ aụ. Anyị maara na e nwere nnukwu oge na na ha, ọnụahịa na-arị elu. Ọ bụ ya mere, ọ bụrụhaala na anyị nwere ike, anyị ga-agbanwe ụbọchị. Ọ bụghị otu ihe ịhapụ ịhapụ Friday karịa n'ehihie Thursday.
Ọnọdụ ala: Na agbanyeghị ebe anyị na-aga, ọ ga-ekwe omume mgbe niile ịhọrọ ụlọ nkwari akụ ndị na-adịchaghị etiti. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ejide n'aka na ọnụahịa ahụ ga-adịkwa iche iche. Chọọ n'etiti ụlọ dị nso ọdụ ụgbọ, ọ bụ ezie na ha dịtụpụrụ ntakịrị na mpaghara isi.
Akwụkwọ: Ọ bụ ezie na ihe kachasị anya bụ ime ihe ahụ ndokwa tupu oge eruo, mgbe ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume. Ndoputa mbu nwere ike buru oke ego. N'ezie, n'oge a, anyị nwere ụfọdụ ụlọ oriri na nkwari akụ na-enye nnukwu ego mgbe enwere naanị ụlọ ole na ole anaghị akwụ ụgwọ. Na-mgbe niile na-a atta ntị nke ọma!
Nyocha ụlọ nkwari akụ
Mgbe anyị mere ndoputa, anyị na-achọ mgbe niile ịmara ma ọ bụrụ na anyị na-eme ihe ziri ezi. Otu ụzọ kacha mma anyị nwere maka nke a bụ nyocha ndị ahịa. Ọ bụ ezie na ha ga-adị ezigbo iche, ha nwere ike inyere anyị aka mgbe niile ịmatakwu ihe anyị ga-achọta. Nke mbụ, echiche dị otú ahụ na-esokarị nọmba. Ọ ga-abụ akara enyere ọrụ dị iche iche nke ụlọ nkwari akụ ahụ nwere.
Ọ bụrụ na ị nwere karịa 6, mgbe ahụ anyị nwere ike ikwu maka ụlọ oriri na ọ interestingụ veryụ mara mma. N'ezie, ị nwere ike ịhapụ ka ndị na-abachaghị uru jiri gị. Naanị, anyị na-adụ ọdụ ka ị gụọ okwu ọ bụla nke ọma ịmata ụdị akara a. N'etiti ọtụtụ Fim ị ga-enwe ike ịmata ma ọ nwere ezigbo nhicha na nkasi obi. Ọrụ ahụ na omume enyi yana ọ bụrụ na mkpọtụ ahụ bụ otu n’ime isi okwu adịghị mma ma ọ bụ na mpaghara adịghị mma.
Ọ dịkwa mkpa ile anya na mbata na oge nnabata. Ọ bụ ihe amamihe dị na nke a bụ awa 24. N'otu ụzọ ahụ, anyị ga-arụkwa ọrụ niile ha na-enye anyị. Maka nke a, ma zere ịtụnanya, ọ dị mkpa iji nlezianya gụọ ihe niile. Ọ bụ ezie na ịme ihe a niile ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ, ọ dịghị ihe dịka inyere anyị aka na mmetụta anya. Ihe onyonyo a zuru oke iji kwado okwu ma nye anyị echiche sara mbara banyere gburugburu ebe obibi.
Dịka anyị nwere ike ịhụ, maka ndị njem niile, ịchọta azụmaahịa ụlọ oriri na ọ organizingụ andụ na ịhazi njem na ntanetị bụ egwuregwu ụmụaka. Ọ bụrụgodi na ọ ga - ewetụ obere oge, ọ ga - abụ nnukwu egwuregwu oge ọ bụla ma anyị makwa na anyị nwere ezigbo aka maka ụfọdụ ezumike dị ọnụ ala echefughi.